मेगा बैंकको १८ लाख कित्ता शेयर बिक्रीमा, प्रतिकित्ता मूल्य कति ? - Arthasansar
शुक्रबार, ०९ असोज २०७७, ०७ : २७ मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं – मेगा बैंक लिमिटेडले असाेज ११ गते आइतबारबाट १८ लाख कित्ता शेयर लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले संस्थापक समूहको ११ लाख ३३ हजार ३ सय ४४ दशमलव ७० कित्ता र सर्वसाधारण समूहको ७ लाख ७ हजार ३९४ दशमलव ६३ कित्ता शेयर लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्ने भएको हाे ।
उक्त शेयर खरिदका लागि लगानीकर्ताहरुले असोज १८ गतेभित्र आफूले खरिद गर्न चाहेको प्रतिकित्ता शेयर र दररेट खुलाई गोप्य शिलबन्दीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि न्यूनतम १ सय रूपैयाँ र त्यस भन्दा बढी कतिमा शेयर खरीद गर्न चाहेको हो ? स्पष्ट खुलाई बोलकबोल आवेदन दिनुपर्ने मेगा बैंकले जनाएको छ ।
बैंकको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ ।
बैंकले प्रकाशन गरेकाे सूचना हेर्नुहोस् :
५१.६५ अंकले घट्यो सेयर बजार, ८ अर्बको कारोबार
नेरुडे लघुवित्तको सेयर रजिष्ट्रार चयन
एशियन लाइफको लिलामी सेयर भर्ने आज अन्तिम दिन